HomeMyan - SPSU MDY
In 1989 (1351 ME), Sasanatakksila Dhammacariya (B.A, Buddhism) Degree programme was started to change for the students who had passed the Pathamagyi-level examination. To them,4years for the academic learning are fixed with term paper of pages 50 to 100 and meditation practice for ten days after their final examination. Apart from the three faculties as the main subjects, Departments of Pali Literature, Myanmar Literature, English and Propagation of Buddhist Desana were extended as the minor subjects. The University now offers Sasanatakksila Dhammacariya (B.A, Buddhism), Sasanatakksila Mahadhammacariya (M.A, Buddhism) and Ph.D. (Sasanatakkasila Dhamma Paragu) Degree.
More than that, the University providesamonth course on traditional medicine for the fourth-year students and third-year students and, encourages the development of religious spirits to the monks, having passed the final examination, who are going to work in the missionary work at the border and remote areas and before presentingathesis, sends them to practice meditation under the guidance of meditators at Mahaci Meditation Centre.
ပါမောက်ခခြုပျ၊ ဒုတိယပါမောက်ခခြုပျ၊ မျောကှနျးထိနျးနှငျ့ လကျထောကျမျောကှနျးထိနျး (ပညာသငျနှဈအလိုကျ)
၁။ ပါမောက်ခခြုပျ (၁) ဘဒ်ဒန်တဇောတိကာဘိဝံသ
(၇) ဘဒ်ဒန်တပဏ်ဍိတဝရာဘိဝံသ ၁၉၈၆-၁၉၈၈
၂။ ဒုတိယပါမောက်ခခြုပျ ((၁) ဘဒ်ဒန်တစန်ဒရ
(၃) ဘဒ်ဒန်တဉာဏာလင်ျကာရာဘိဝံသ ၁၉၈၈-၁၉၈၉
၃၊ မျောကှနျးထိနျး (၁) ဘဒ်ဒန်တသဋ်ေဌိလ
(၅) ဘဒ်ဒန်တကသေရ ၁၉၈၇-၁၉၈၈
၄။ လကျထောကျမျောကှနျးထိနျး (၁) ဘဒ်ဒန်တဒဝေိန်ဒ
(၂) ဘဒ်ဒန်တကုမုဒ ၂၀၀၅-၂၀၀၉
(က) ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃသမ္မုတိရသံဃကိုယ်စားလှယ်(၁၀၀၀)ကျော်တို့၏ ဆန္ဒနှင့် အညီ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့်ပွားရေးအတွက် အထက်တန်း ကျကျ ဆောင်ရွက်ရန်။
( ခ) ပထမဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃအစည်းအဝေးကြီးက ချမှတ်ထားသော ဖော်ပြ လတ္တံ့ပါ အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံစေရန်-
(၂) ပိဋကတ်ကျမ်းဂန် နှံ့စပ်စေခြင်း။
(၃) ပါဠိဘာသာ တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်စေခြင်း။
(၄) မြန်မာစာပေအရေးအသား တော်စေခြင်း။
(ဂ) ပြည်တွင်းပြည်ပတို့၌ သာသနာပြုစွမ်းနိုင်သော ရဟန်းတော်များ ပေါ်ပေါက်လာစေရန်နှင့် အထူးအားဖြင့် သင်တန်းသား ရဟန်းသံဃာများ အား ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး၊ ကျေးလက် တောရွာပါမကျန် နေထိုင်သီတင်း သုံး၍ သာသနာပြုနိုင်သည့်စိတ်ဓါတ်မျိုး၊ အလေ့အကျင့် မျိုး ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
(ဃ) လူအများ တွေ့ကြုံခံစားနေရသော ကိုယ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ စိတ်၏ဆင်းရဲခြင်း၊ နှလုံးမသာမယာခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ တရား ဒေသနာဖြင့် သက်သာပျောက်ကင်း ချမ်းသာစေရန်။
( င ) သာသနာ့တက္ကသိုလ်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များ၏ အဆင့်အတန်းအောက် မနိမ့်ကျစေဘဲ ညီမျှသော အဆင့်အတန်းတွင် ရှိနေစေ ရန်။
အဂ် လိပ် ဌာန